Cristiano Ronaldo Oo Ku Soo Dhawaaday Tartanka Kabta Dahabka Ah Ee Gool Dhalinta Yurub Iyo Tartanka Oo Xiiso Yeeshay. - Gool24.Net
Cristiano Ronaldo Oo Ku Soo Dhawaaday Tartanka Kabta Dahabka Ah Ee Gool Dhalinta Yurub Iyo Tartanka Oo Xiiso Yeeshay.
Cristiano Ronaldo ayaa si wayn sare ugu soo qaaday hamigiisa in uu markii shanaad ku guulaysan karo kabta dahabka ah ee gool dhalinta horyaalada Yurub kadib markii uu sii watay qaab ciyaareedkii fiicnaa ee uu horyaalka Serie A kula soo laabtay.
Cristiano Ronaldo ayaa soo joogteeyay gool dhalintiisa intii laga soo laabtay go’doonkii fayraska karoonaha wuxuuna hadda u muuqdaa mid soo gaadhay heer uu ku fikiri karo in uu ku guulaysto kabta dahabka ah ee uu rajada badan ka qabin markii xili ciyaareedka la hakiyay.
Ronaldo Golden Boot
Kulankii shalay ee ay Juventus ka badbaaday guuldarada ka soo gaadhi lahayd kooxda Atalanta waxa uu Ronaldo dhaliyay laba gool oo rekoodhayaal ah isaga oo goolka barbaraha Juventus u dhaliyay daqiiqadii 90 aad ee dhamaadkii ciyaarta.
Waxayna labadan gool ka caawiyeen in uu sare u soo qaaday in uu markii shanaad ku guulaysan karo kabta dahabka ah ee qaarada Yurub.
Juventus waxaa horyaalka Serie A uga hadhsan 6 kulan wuxuuna Ronaldo 6 gool ka hooseeyaa xidiga gool dhalinta Yurub ee kabta dahabka ah hogaaminaya ee Robert Lewandowski, waxayna arintani muujinaysaa in Ronaldo uu fursad wayn hadda helay.
Haddii aan ka qiyaas qaadano lixdii kulan ee uu Ronaldo soo ciyaaray intii hakadkii xili ciyaareedka laga soo alabtay waxa uu ku soo dhaliyay 7 gool inkasta oo 4 ka mid ahi ay rekoodhayaal ahaayeen, waxayna tani muujinaysaa in lixda kulan ee u hadhsan uu ku soo gaadhi karo Lewandwoski ama uu ku dhaafi karo.
Cristiano Ronaldo ayaan kabta dahabka ah ee Yurub ku soo guulaysan wixii ka danbeeyay xili ciyaareedkii 2014/15 kii markaas oo uu Real Madrid ugu soo guulaystay kabtiisii Yurub ee ugu danbaysay isaga oo 48 gool xili ciyaareedkaas kabta dahabka ah ku qaaday.
Cristiano Ronaldo iyo gool dhaliyaha kooxda Lazio ee Ciro Immobile ayaa Robert Lewandowski kula tartamaya in ay kabta dahabka ah ee Yurub ka qaadi karaan waxaana xiiso badan yeelan doona goolasha ay labadan xidig dhalin doonaan kulamada baaqiga u ah.
Robert Lewandowski waxa uu kaalinta kowaad ugu jiraa 34 gool laakiin Ciro Immobile oo 29 gool haysta ayaa fursad u haysta in uu isna kabta dahabka ah markii ugu horaysay ku guulaysan karo laakiin Ronaldo oo soo dhaliyay 28 gool ayaa culayska soo saaray Ciro Immobile iyo Lewandowski.